Deg deg:Koox Hubaysan oo weerartay Masaajid New-zealand Kuyaala. | ogaden24
Deg deg:Koox Hubaysan oo weerartay Masaajid New-zealand Kuyaala.
Koox Hubaysan ayaa weeraray masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand sida lagu sheegay warbixin Hordhac ah oo kasoo baxday Police-ka, kuwaasi oo sheegay inay dadaal ugu Jiraan sidii ay Gacanta ugu dhigi lahaayeen dhagar Qabayaasha.
Goob Jooge aan ka Fogayn masaajidka laweeraray ayaa saxaafada maxaliga ah u sheegay in ay dad kudhinteen weerarka, balse majirto cid cadayn karta khasaaraha rasmiga ah maadaama wali xaaladu taagan tahay Gudaha masjidkana aan Lagali karayn.
Ciidamada Poliiska ayaa dadka uga digay Aaga masaajidka oo ay isku Gadaameen sidoo kale waxay ciidamo Tira badan Lageeyay Iskuulada, Isbitaalada, iyo Goobaha dadwaynaha ee Aagaasi kadhow si Amaankooda loo ilaaliyo.
Muuqaal aan Lahubin saxnimadiisa ayaa soo baxay waxaana muuqaalku uu muujinayaa Nin Hubaysan oo Isaga oo Rasaasta Furaya Hadana is duubaya, Mohan Ibrahim oo ku sugnaa dhulka masjidka ayaa warbaahinta u sheegay in markii hore ay u qaateen in shanqartu ay koronto tahay, balse markii Laxaqiiqsaday ay dadku bilaabeen inay kala Firxadaan waxaanu intaa kudaray in saaxiibadii masaajidka kujiraan wali.